कम छैन टेम्केको सान ? - Hamrokhotang
Home खोटाङ समाचार कम छैन टेम्केको सान ?
कम छैन टेम्केको सान ?
२०६८ फाल्गुन ७, आईतवार ०६:०८
टेनिस रोका – जहाँ यतिबेला हजारौँ मानिसहरुको जमघट भएको छ । खुल्ला आकाश छ कुनै कतै पहाड अनि हिमालका चुचुराहरुमा भने कुहिरो पनि रमाइरहेको छ ।
उत्तरी भागमा पूरै हिमालयबाट बगेको चिसो तर न्यानो हावा अनि सुन्दर मनोरम पाखा पखेरा, गाउँ अनि शहरका ती बस्तीहरु, उत्तरपट्टी हिमालहरुमा ओछ्याइए झै गरिएका हिउँका दृश्यहरुले त्यहाँ आगन्तुक उनीहरु सबैलाई स्वागत गरिरहेको छ ।
किन की आज खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने समुन्द्री सतह भन्दा ३ हजार २ सय फिटको उचाईमा रहेको टेम्केको चुचुरामा टेम्के महोत्सव २०६८ को उदघाटन भव्यताका साथ भइरहेको छ । टेम्के महोत्सवमा सहभागी हुन अहिले खोटाङ भोजपुरका राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारीहरु, विद्यार्थी लगायतको समुह आईसकेका छन् । कतिपयले भने र्याली सहित टेम्केको चुचुरा पुगेका छन् । टेम्केको डाँडामा अहिले हजारौँ मानिसको मेला लागेको छ ।
त्यहाँ अहिले महान अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक दिन बन्न पुगेको छ । पूर्वको पशुपति भनेर खोटाङको हलेसीलाई जसरी चिनिन्छ अब पूर्वको स्वर्गको चुचुरा भनेर टेम्केलाई चिनाउँदा खासै फरक नपर्ला । पर्यटकिय दृष्टिले त टेम्केको चुचुरा पुग्ने हो भने देशका अन्य पाखा पखेराहरु घुमिरहनै पर्दैन झै जस्तो हुन्छ । अझै अहिले त्यहाँ निर्माण भइरहेको टेम्के भ्यू टावरको निर्माण पश्चात त ८ हजार भन्दा माथिको उचाईमा रहेका ६ वटा हिमाल त त्यहाँबाट मज्जाले देख्न तथा हेर्न पाइन्छ रे ।
त्यो पनि नांगो आँखाले । टेम्केको चुचुराबाट अहिले नै समगरमाथा, लामलाङ, ल्होत्से लगायतका हिम श्रृंखलाहरु मज्जाले अवलोकन गर्न सकिन्छ । त्यति मात्रै होइन जुन चुचुराबाट देखिने मनोरम पाखा पखेराहरुले त्यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यहरुले जो कोहीलाई पनि मख्ख पारेकै हुन्छ । यी त पर्यटकिय कोणका कुरा भए । टेम्केलाई पहिलेका बुढाबुढीहरुले सुनखानी, नुनखानी तथा फलाम खानी डाँडाको नाम समेत दिन भ्याएका छन् ।
टेम्के महोत्सवमा सहभागी हुँदै खोटाङ राधाकृष्ण माविका विद्यार्थीहरु ।
Photo : Laxmi P. Subedi, Facebook
उनीहरुको भोगाई, देखाई सुन्ने हो भने त्यहीँ ट्याम्केमा नुनखानी छ रे । पहिले एक जना भेडी गोठालाले बाँसको पानी खाने ढुंग्रोमा पानी भरेर ल्याउँदा त्यो पानी पूरै नुन जस्तै नुनिलो भएको थियो रे । तर पछि त्यो पानी भएको ठाउँबाट पानी सुकेर नआउन थालेको मानिन्छ । त्यस्तै फलाम खानी प्रचुर सम्भावना रहेको त्यहाँका जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु हो भने त्यो पनि नहोला भन्न भने सकिदैन । टेम्केमा सयौं किसिममका जडीबुढीहरु पाइन्छन् । विश्वकै अति लोकप्रिय तर दुर्लभ बडीबुढीहरु पनि त्यहाँ रहेको बताइन्छ । गाउँ बस्तीहरुलाई छाडेर टेम्केको चुचुरा पुग्न भने ३ देखि ४ घण्टा जंगल र डाँडापाखाको बाटो हिड्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो हिडाई अति मनोरम अनि अविस्मरणीय बन्न सक्छ । त्यो जंगलमा पहिला पहिला भने बाघ भालु पाइए पनि अहिले मानव बस्तीको विकाससँगै बाघ भालु पाइन छाडेको छ । तर त्यो जंगलको बाटो जाँदा चरा चुरुंगी, मृग, खरायो, कालिज, भ्याकुरा जस्ता पशुपंक्षी देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा टेम्केको सान कम छैन । अझै अहिले पर्यटकीय मेला समेत भएको छ । यो मेलामा डेढ लाख पर्यटक भित्र्याउने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ तर यो मेलाले त्यति पर्यटक भित्राउनु मात्रै होइन टेम्के यस्तो ठाउँ रहेछ जुन पूर्वको स्वर्गको चुचुरो झै रहेछ भन्ने सन्देश विश्वसामु पुर्याउन सक्नुपर्दछ ।
खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने चखेवाबाट टेम्केको चुचुरा लगिएको सडक बाटो ।
टेम्के जाने बाटोमा ढुंगा छापेर बनाइएको बाटो ।
टेम्केको चुचुरोबाट देखिएको दृश्य ।
टेम्केको चुचुरो परिसर र त्यहाँ देखिने दृश्य
टेम्केको चुचुरामा जिर्णस्वार बन्दै गरेको मन्दिर । यो मन्दिरको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
टेम्केको चुचुरामा बन्दै गरेको भ्यू टावर ।
Photo: Tenish Roka (rokatenish@gmail.com)